Wasiir Cawad “Dooda taagan ma ahan in Kenya ay gudaha u soo gashay Soomaaliya | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Wasiir Cawad “Dooda taagan ma ahan in Kenya ay gudaha u soo...
Wasiir Cawad “Dooda taagan ma ahan in Kenya ay gudaha u soo gashay Soomaaliya
Wasiirada Arrimaha Dibadda dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ay isku afgarteen in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo labada dhinac ka socda kuwaasi oo booqan doono xadka labada wadan.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Amb. Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in ay ku heshiiyeen in la hormariyo iskaashiga labada wadan, lana xoojiyo go’aankii labada Madaxweyne ay gaareen ee ahaa in la joojiyo dhismaha Darbiga.
Wuxuu sheegay Wasiirka dooda haatan taagan in aysan aheyn in Kenya ay gudaha u soo gashay xadka Soomaaliya, balse ay tahay Darbiga ay Kenya dhiseyso, taasina ay tahay muhiimada.
“Waxaan isku afgaranay inaan iskaashiga hormarino, waxaa la sameynayaa guddiyo kale oo arrintan ka shaqeynaya, dooda waxay joogtaa in Darbiga aan la dhisin, dhibta hada taagani waa Darbiga, mana jirto dhib kale oo annaga iyo Kenya inoo dhaxeysa.” Ayuu yiri Wasiir Cawad oo la hadlay BBC-da.
Dhinaca kale Wasiirka ayaa soo hadal qaaday Dacwadii Soomaaliya ay Imaaraadka Carabta uga gudbisay Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay, wuxuuna sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin in ay difaacaan Madax banaanida Soomaaliya.
“Imaaraadka waa walaalaheena, is ixtiraam ayaa naga dhaxeeya, runtii waxay ku kooban tahay oo keliya inaan diidannahay inaan la gelin heshiis aanay ka warqabin Dowladda Soomaaliya, maxaa yeelay waxay xad gudub ku noqoneysaa madax banaanida Soomaaliya.” Ayuu markale yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda.